iFixit kwadoro na batrị nke Apple Watch ọhụrụ bụ nke ka ukwuu ikike | Akụkọ akụrụngwa
iFixit kwadoro na batrị nke Apple Watch ọhụrụ ahụ nwere ikike ka ukwuu
Na Septemba 7, ụlọ ọrụ Cupertino gosipụtara ụdị iPhone ọhụrụ, ekweisi ikuku AirPods na ọgbọ nke abụọ nke Apple Watch, ọgbọ nke abụọ nke wetaara anyị dị ka isi akwụkwọ akụkọ. nguzogide mmiri na GPS wuru na ngwaọrụ. Ya mere na ngwaọrụ ahụ nwere ike iji GPS na-enweghị batrị emetụta nke ọma, Apple ejirila mmelite a mee ka ọnụ ọgụgụ batrị ahụ gbasaa, dị ka ụmụ nwoke iFixit gosipụtara, mgbe ha gbusịrị ọgbọ nke abụọ nke Apple Watch Manzana.
Ma e wezụga GPS, nke na-anọchite anya akụkụ dị mkpa na oriri batrị nke ngwaọrụ ahụ, ihie nke ihuenyo OLED abawanyela na ọgbọ nke abụọ nke ngwaọrụ ahụ. Dị ka anyị nwere ike ịhụ na onyonyo nke iFixit gosipụtara, ụdị 38-millimita, naanị otu ha nwere ike inyocha ugbu a, na-enye anyị batrị 273 mAh, ma e jiri ya tụnyere 205 mAh nke ụdị nke mbụ.
Na mgbakwunye na batrị ka ukwuu, ọnụọgụ nke iji kaa akara OLED na chassis nke ngwaọrụ abawanyela. iji nye nguzogide mmiri na Apple ka emejuputara na ngwaọrụ. Ihe ohuru ohuru ohuru a wetere anyi bu ohuru okwu ohuru, edobere ya ka o nwee ike ichupu mmiri oge obula anyi jiri ya egwu mmiri.
Na mwepụta nke ọgbọ nke abụọ a, ọ naghị anọchite anya mgbanwe dị egwu gbasara ọrụ yana ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị na-anụ ụtọ ọgbọ mbụ, nke ha anaghị ezube ịkwalite ngwaọrụ ha n'ọgbọ nke abụọ. karịsịa ma ọ bụrụ na ha anaghị eme atụmatụ iji GPS na mmiri na-eguzogide (submersible ruo 50 mita) bụ kpamkpam nke abụọ maka ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » iFixit kwadoro na batrị nke Apple Watch ọhụrụ ahụ nwere ikike ka ukwuu
Etu esi edobe faịlị Google gị na Google Takeout